トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "ngusompempe", iqabane iimvakalelo?
Ikhadi le ndlela kufumana 3500 yen lwentsebenzo simahla ngentsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa of "ngusompempe" isikhundla umva
"ngusompempe" inentsingiselo ukuba badlale okanye waphila noko ilahlekile. Ngenxa yothando, aye ebantwini bethu wabaleka ibone kwi yam leyo uthandana ngaphambili, ukuba uze ugqibe ekubeni ekudibaniseni ezama Yarinaoso, ezifana uya atshate xa abantu umtshato, elidlulileyo kwaye wenze isigqibo elikhulu yakho mhlawumbi ikhadi bhula ukuba unalo lweziqalelo kunyanzeleka.
"usompempe" kwi iimvakalelo elikhuselayo
"ngusompempe" indawo entle ibimele ukuba Kuchaza xa lukhupha indawo entle, ukusondela ukuze ilunge ngaphezu amava iziganeko kule meko edlulileyo nto ithetha ukuba nawe uhambe. Nabani na othanda akakho, ukuba nibe umthandi entsha, inokuba imiqondiso bafumana iqabane kakhulu entle ngaphezu ex-boyfriend. Isenokuba
ubuhlobo kunye naye inkqubela eluthandweni, ukuba abantu musa ukuhamba kakuhle the lover, kukho kwakhona ithuba loxolelaniso. Xa kusondela kuwo besini esahlukileyo ukuba ukhathazekile, kwanokuba akuthethi ukuba zihambe kakuhle, ngoba kungenzeka ukufumana impendulo eyenza ingqiqo, uya kuba nako ukuqhubela phambili imvakalelo kukhuthaza kwaye kunika umdla.
xa "usompempe" liye kufika ngaphandle kwindawo entle, kuba le meko kukuba elungileyo kakhulu ukuba ibekwe ngoku, kuyimfuneko ukuba sibe nesimo sengqondo esihle ukufikelela ngaphandle kwabo siqu ukuba ithuba eze ukuyenza abanekratshi. Nangona kunjalo, ukuze lula ngakumbi ukugeleza imvakalelo ze silibale injongo ukuqiniseka ukuba akukho vuthululani injongo ulwazi ngokucacileyo.
umva ukuma iimvakalelo
"ngusompempe" elinye qela kwindawo umva uthathwa ukuba intsingiselo "ngusompempe" kukuthi, umsebenzi kangaka nzima kude akayi kuthetha ukuba aura abe engento. In kumava exesha elidlulileyo neenkumbulo eziye ulinywa abantu ababini, ebonakal uphuhliso e Wakarebanashi ngengozi To Li waba iinkumbulo ebuhlungu, ezifana ngempazamo sasingenaxhala ingakwazanga ukunikwa kulungiswa udoti abemthanda, kungekhona uphawu yakhe entle kakhulu.
iimvakalelo zakhe, ngokuqinisekileyo ngenxa yokuba kubhaliwe akazami Ayumiyoro kuni, kubhetele ukuba ukukhuthaza kangangoko kunokwenzeka iimvakalelo bakhe ngeli xesha usisilumko. Xa
ukubona flow elikhulu, umva indawo i "usompempe" ungaze kunalawo kum. Noko ke, ngenxa yokuba ngelo xesha, okanye ungene Nijonge leyinene ezolile ukutwalilila emva ngaphambili, ndithi kuyimfuneko ukuze alungise indlela yena okanye yena imigudu. Nokuba kunjalo kude iinzame lo kuvuzwa, kufuneka bakwazi ukufunda into ngokutshintsha indlela yokucinga.